Debian sy Fedora dia manandrana mamaha ny olan'ny fiankinan-doha | Avy amin'ny Linux
Ny fatorana ny kinova dia mampitombo ny olana: ny fitahirizam-boky iray dia mety mitaky kinova fiankinan-doha mba hihazakazahana, ary ny iray hafa mety mila hafa.
Tetikasa maro no mitaky ny fanavaozana ny famakiam-boky farany, izay tsy mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fizarana (ny fampandrosoana mitohy dia tanterahina amin'ny tontolo iainana Node.js amin'ny fampiasana ny kinova farany amin'ny rafitra, ary mila fanampiana ny fizarana mandritra ny taona maro).
Fiezahana manamboatra kinova fonosana amin'ny fizarana fotsiny mitarika fitomboan'ny kinova efa lany andro ao amin'ny tahiry izay tsy nohavaozina nandritra ny taona maro. Ny fahatapahana fikojakojana fonosana iray dia misy fiantraikany ratsy amin'ny fonosana maro hafa ary miteraka olana bebe kokoa aza.
Ankoatr'izay, lfiankinan-doha amin'ny hazo fijaliana mitarika amin'ny zava-misy fa tranomboky maro an'ny Node.js nanjary tsy azo esorina amin'ny rafitraizay kosa manakana anao tsy hamafa ny programa Node.js hafa.
Mba hamahana izany dia nankatoavin'ny tetikasa Fedora vao haingana ny drafitra hampiatoana ny fananganana default amin'ny fonosana misaraka amin'ny tranomboky ampiasaina amin'ny tetikasa Node.js miorina.
Nanapa-kevitra izy, manomboka amin'ny Fedora 34, tsy hanome afa-tsy fonosana fototra ho an'ny Node.js miaraka amin'ny mpandika teny, lohateny, tranomboky voalohany, binariary ary fitaovana fitantanana fonosana fototra (NPM, kofehy).
Ao amin'ny application Fedora repository izay mampiasa Node.js, avela hampiditra fiankinan-doha rehetra misy ao anaty fonosana iray, tsy mizara sy manasaraka ireo tranomboky ampiasaina amin'ny fonosana misaraka.
Ny fametahana tranomboky dia hanaisotra ireo korontana kely ao anaty fonosana, hanamora ny fikojakojana fonosana (teo aloha, ny mpikarakara dia nandany fotoana bebe kokoa nandinihana sy nanandramana fonosana an-jatony niaraka tamin'ny tranomboky noho ilay fonosana lehibe niaraka tamin'ny programa), hamonjy fotodrafitrasa amin'ny fifanolanana ny famakiam-boky ary hamaha ny olana amin'ny fampifandraisana ireo kinova famakiam-boky (ny mpikarakara dia ahitana kinova andrana sy voasedra amin'ny famokarana ao anaty fonosana).
Ny lafy ambany amin'ny fampidirana dia ny fahasarotana amin'ny fizotran'ny fanitsiana ireo marefo ao amin'ny trano famakiam-boky, izay mitaky asa mifandrindra amin'ireo mpikojakoja fonosana rehetra izay misy ny trano famakiam-boky marefo. Misy loza ateraky ny fonosana iray hanadino ny manavao tranomboky marefo marefo ary tsy ho voamariky ny fonosana.
Ny namorona ny Debian koa dia miresaka momba ny famadihana modely fampidirana fiankinan-doha mitovy amin'izany. Ho fanampin'ny Node.js, ny adihevitra dia mikasika ny famoronana fonosana ho an'ny sehatra Kubernetes sy tetikasa amin'ny fiteny PHP sy Go, izay misy fironana hizara ho fiankinan-doha kely. Tsy mbola nisy ny fanapahan-kevitra noraisina, saingy antenaina fa vao mainka hiharatsy ny olana ary na ho ela na ho haingana dia terena hanao zavatra ny tetikasa.
Ny interface web gsa (Greenbone Security Assistant) ho an'ny scanner security gvm (Greenbone Vulnerability Management) dia nantsoina ho ohatra iray amin'ireo olana misy amin'ireo mpikojakoja fonosana.
Ny kinova gsa nalefa an'i Debian dia nivadika ho tsy mifanaraka amin'ireo kinovan'ny gvm vaovao, saingy tsy azo natao ny manavao ny gsa amin'ny kinova ankehitriny satria misy fiovana lehibe izy io ary mampiasa npm hampidina ny tranomboky ilaina Node.js.
Betsaka loatra ireo trano famakiam-boky nangatahina ary mitaky famoronana fonosana vaovao ao Debian mba hisy hitahiry azy ireo, satria ny lalàn'i Debian dia mandrara ny fametahana singa ivelany mandritra ny dingan'ny fananganana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Debian sy Fedora dia manandrana mamaha ny olan'ny fiankinan-doha
Qtkk dia hoy izy:
Ity sombintsombin'ny rafitra sy tranomboky ao amin'ny ECMAscript ity dia nanjary tsy nanjary.
Mamaly an'i Qtkk